"परमेश्वरको गर्भपतन आशीर्वाद र अमेरिका को  | Apg29
कार्यक्रम मा उनको शब्दहरू निम्न थिए:
"गर्भपतन, म तपाईंलाई सलाम!
महिला तपाईं एक गर्भपतन गर्न आवश्यक छ भने, एक संगठित!
तपाईं एक गर्भपतन गर्न चाहनुहुन्छ भने, एक संगठित!
तपाईं गर्भवती छैनन् तर तपाईं शायद हुनुपर्छ लाग्छ भने, र तपाईं भविष्य गर्भपतन व्यवस्था गर्न चाहनुहुन्छ, एक संगठित!
तपाईं गर्भवती हुनुहुन्छ र गर्भवती बन्न चाहन्छ भने, छैन।
यसलाई तपाईं छ र एक ठूलो सम्झौता हुन पर्दैन। यसको बारेमा 300 UD.som6चलचित्र टिकट एक ठूलो सम्झौता वास्तवमा हो। चलचित्र टिकट ठूलो कुरा हो।
र महिला भूल छैन: तपाईं जीवन दिन शक्ति छ, र मानिसहरू यसलाई नियन्त्रण गर्न प्रयास गर्न चाहन्छौं।
तिनीहरूलाई यो नहीं गरौं।
भगवान गर्भपतन आशीर्वाद र भगवान अमेरिका आशीर्वाद! "
त्यो त गीत र नृत्य अन्त्य।
यो बच्चाको मित्र थिए परमेश्वर र प्रभु येशू विरुद्ध निन्दा, जस्तै मेरो लागि छ!
एक गर्भपतन एक महिलाको अन्तस्करणलाई unheeded प्राप्त गर्न सक्दैन, र कसरी यी हुन्: महिला, आफ्नो हार्ड हृदय मार्फत यी महिला एक असल र मायालु आमा सम्म बाँच्न?।
यी दुष्ट कामहरू संसारमा धेरै देशहरूमा स्वीकार गर्ने, हामीलाई परमेश्वरको न्याय उहाँले एक निर्दोष, defenseless नजन्मेको बच्चाको हामी अभ्यास हिंसा निवेदन जाँदै छ जहाँ आकर्षित।
अन्ततः सबै एक समय सिर्जना डुबेर मर्छन् कि जलप्रलयको ट्रिगर कि हिंसा थियो!
हुनत त अब, तर जीवन को सृष्टिकर्ता परमेश्वरको अघि परिष्कृत र कानुनी रूपमा!
तर प्रभु येशू रूपान्तरणको, र आफ्नो पापको स्वीकार गरेर र खोजी उहाँको क्षमा यो ऋण हटाउन सकिँदैन।
यदि छैन, यो एक पटक न्यायको दिन मा एक निन्दा र विनाश हुनेछ।
बाइबल OT यसलाई छोराछोरीलाई छ, र childlessness किन दुःखकष्ट र आशिष् को हानि प्रमाण थियो धेरै प्यार आशिष् थियो।
समय र भन्सार धेरै अब मारे हुनुपर्छ भनेर भावी बच्चा अनावश्यक कुरा हेर्न, परिवर्तन गरेका छन्।
1973 मा, गर्भपतन कानुनी अमेरिका मा उनको शरीर नियन्त्रण गर्न एक महिलाको दायाँ संग, abortions मा एक आमूल वृद्धि परिणामस्वरूप भयो।
टोलीमा जीवन वेवास्ता र एक व्यक्तिको जन्म अवरोध खडा गर्न सही थियो जब कि।
स्वीडेन मा, 1975 मा यस्तो व्यवस्था र आज 10 एक दिन 35000-38000 abortions प्रदर्शन वर्ष, छ!
(वर्तमान जनसंख्याको बारे 12 प्रतिशत> 40 वर्ष परित्याग)
अमेरिका, 60 लाख fetuses संयुक्त राज्य अमेरिका आज, 325 लाख बासिन्दाहरू आज गर्न कानुनी रूपमा अर्को मारे। (> हालको जनसंख्याको 20 प्रतिशत> 40 वर्ष परित्याग)
भ्रूण निदान मार्फत गर्भमा चाल रूपमा त जीवन हत्या, हत्या हो जीवन निर्माता परमेश्वरको अघि रूपमा आफ्नो कार्यहरू सफाइ गर्ने मौका दिइएको छ,!
परमेश्वरको सामु हामी सबै एक दिन, सबै यी तिनीहरूले आमा सोध्न गर्दा आफूलाई आफ्नो मामला बनाउन fetuses हाम्रो कार्यहरू लागि जवाफदेही आयोजित गरिनेछ: "! आमा, म किन बाँच्न गर्नुभयो"
यो न्याय लेख्छन्, तर उकसाना, वर्ना र एउटा हराएको मानवता पुस्तिका!